Hanna moo saamicha?
Hanna moo saamicha? Featured
Dhiheenya kana gaazexeessitoonniifi ogeessoonni kominikeeshinii godinaaleefi magaaloota Oromiyaa addaddarraa ba'aba'an leenjii guyyoota sadiif Adaamaa hoteela tokkotti walga'anii turan.
Hirmaattonni leenjichaa harki caaluu daandii kiiloomeetiroota dheeraa qaxxaamuraniitu kan dhufan. Leenjichis walta'iinsa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaafi dhaabbata tola oolaa 'UNICEF'n kan qophaa'e ture.
Guyyaa jalqaba leenjichaa leenjitoonni hedduun bakki leenjichi itti qophaa'e hangas mara beekamaa waan hinturreef bakka isaa dhabanii rakkachuu isaanii yommuu waliif ibsan dhaga'eera.
Anis akka leenjituu tokkootti bakkicha namoota afur ergan gaafadhee booda bira ga'e. Kana malees, galmi leenjiin itti qophaa'e darbii saddeettaffaa irra yoo ta'u, liiftiin hoteelichaa namoota afur caalaa hinbaatu; innuu harka caalu sababa addaan cituu ibsaafi rakkoo teknikiitiin waan hinhojjenneef baay'een keenya miilaan ol ba'aafi bu'aa turre.
Bu'aa qabeessummaan leenjiin haalota hinmijanne akkanaa keessatti kennamuu kan wal nama gaafachiisu ta'us akkumasattuu guyyaa tokkoofi walakkaan leenjichaa dhume.
Leenjiin guyyaa lammataa hanga sa'aatii laaqanaatti erga taasifameen booda hundi keenya laaqanaaf baane. Yommuu laaqana nyaannee deebinu balballi galmichaa cufaa waan tureef qindeessaan leenjichaa furtuu akka fiduuf gaafatamee dhaqee fidee balbala banee leenjitoonni seenuu eegalan.
Qindeessaan furtuu fidee ol nu seensise sun namoota leenjii kennan keessaa tokko ture. Innis wayita laaqanaaf ba'e kompiyutara laaptooppii isaa chaarjii irra kaa'atee ba'e. Shaanxaan wayaafi bilbila taabileetii isaa baatus achuma bira ture.
Yommuu ol seenu garuu kanneen hunda akka kaa'eetti hinarganne. Laaptooppiifi taabileeniinsaa hinjiran. Wayaansaas shaanxaa keessaa gadi guuramee lafatti naqameera. Yommuu kana arginu hundi keenya ni naane.
Namoonni biroo shan laaptooppii isaanii galmciha keessatti dhiisanis ariitiidhaan gara teessuma isaanii deemanii yommuu ilaalan korojoo isaa malee laaptooppiin isaanii hinjiru. Sababa kanaan leenjichi ittifufuu hindandeenye. Leenjitoonnis ni jeeqaman.
Bulchiinsi hoteelichaas dhimmicha furuuf oliifi gadi jechuu eegale. Qaamoleen nageenyaa ni waamaman, hoteelichi ni sakatta'ame. Hamma dhimmichi qulqullaa'uttis hojjettoonni hoteelichaa to'annaa seeraa jala oolan. Haala kanaan waan dhiheef hunduu gara bultii isaa deeme.
Guyyaa sadaffaa ganamas dhimmi qulqulleessuu akkuma itti fufetti ture. Akka jedhametti sa'aatii laaqanaatti hojjetaa hoteelichaa keessaa tokko bishaan dhugaatii galchuuf furtuu qindeessaa harkaa fuudhee kan ture yoo ta'u, yeroo sanatti namoonni leenjitoota fakkaatanii galmicha seenanii akka turaniifi tarii isaan ta'uu akka danda'u shakkamuusaa dhageenye.
Haala kanaan leenjiin guyyoota sadiif qophaa'e hamma yaadame otoo hinmilkaa'iin xumurameera. Magaalaa guddoo hammana geessu keessatti hoteela sadarkaasaa eeggate jedhamee keessatti si'a takkaan laaptooppiin ja'aafi bilbilli taabileetii tokko baduun hanna moo saamicha jedhama? Kanaaf ammoo eenyuutu itti gaafatama laata?
Torban kana/This_Week 32049
Guyyaa mara/All_Days 1136573